Gabar 5 sano jir Soomaali ah oo la aaminsanyahay in lagu dilay Avesta | Somaliska
Gabar 5 sano jir Soomaali ah oo la aaminsanyahay in lagu dilay Avesta
Gabar 5 sano jir ah oo lagu magaacao Sihaam Yusuf Omar ayaa isbuucaan la waayay meel ay jaan iyo cirib dhigtay iyadoo markii dambe maydkeeda laga helay Hadh ku taala magaalada Avesta ee gobolka Dalarna. Waalidiinta gabadha yar ayaa aaminsan in gabadhooda si kas ah loo hafiyay halka boolisku ay sheegeen in aysan wali hubin sababta ka dambeyga geerida gabadha yar.
Gabadha yar ayaa la sheegay in ay keligeed aadi jirtay goobta ay caruurta ku ciyaaraan oo ku taala guriga hortiisa iyadoo maalintii axadii ay markii cid ugu wardambeysay caruurta la ciyaaraysay. Markii la waayay ayaa hooyada waxay telefoon u dirtay aabaha oo lagu magacaabo Yusuf Omar oo ku nool magaalo kale. Isla markii booliska la wacay ayuu bilowday baadigoobta balse maalintii isniinta ayaa gabadha yar meydkeeda laga helay Harta lagu magacaabo Lumsen.
Dhacdadaan ku dhacday waalidiinta soomaaliyeed ayaa ah mid naxdin leh iyadoo horay uu uga geeriyooday wiilkooda cudur dartiis. Haddii ay geerida gabadha yar ka dambeyso dil ayay arintaan tahay mid xanuun badan. Sababta loo dilayo 5 sano jir ayaa ah mid aan gali karin caqliga bani’aadamka balse waxaa hubaal ah in ay jiraan dad aan lahayn damiir bani’aadanimo. In ay jiraan dadka nuucaas ah ayaa waxaa tusaale u ah in midka mid ah taageerayaasha cunsuriyiinta SD uu internetka ku soo qoray “Siham waa la dilay, taasi waa 1 soomaali ah oo Sweden ka yaraaday”. Wararka qaar ayaa sheegaya in goobta caruurtu ay ku ciyaaraan dhowr maalmood lagu arkay nin aan la aqoonsan.
Waxaan leenahay waalidiinta Soomaaliyeed ilaahay samir iyo imaan ha idinka siiyo. Idinkana kuwii ku waano qaata Allah ha idinka dhigo. Dhimashadu waa Xaq.
30 magangalyo doon ah oo la dajinayo duurka
July 12, 2013 at 23:43
samir iyo imaan ilahay haa kasiiyo waliddinta gabadha yar dhalay saqir aqiro ilahay haa ugaa dhiigo ilaha badalkedaa oo qayr qaabo haasiyo sha alaah geeridu waa xaq wana mel an uwadaa socono ilahay hanoo saqiro Aaaamiin Yarabi
July 13, 2013 at 00:12
Asc dhaman akhyarta ilaahow samir iyo imaankasii waalidka dhalay gabadha oo siibedel khyr qaba ilaahow nagaqabo cunsuriga sweden ilaahow adan kamagangalay waxankayabay naxarisdaradis qofkadilay cunugta saqirka ah ala hooyadi dhashay ilaahow sii waxayku ilowdo iyo samir iyo iimaan kasiii
muscab binu subeer says:
July 13, 2013 at 09:49
innaali laahi wa inailaahi rajicuun ilaah samir iyo iimaan hanagawada siyo saqeerkiina aaqiro ilaah ha idinka yeelo aaadbaan uku xunahay dhibka loogeestay gabadhar
July 13, 2013 at 23:39
Inaa lilaahi wa inaa ilahay raajucuun ilaahay Ayaan uga baryaynaa jinuu janada geeyo saqiirka aan waxba galabsan ee la dulmiyay,ehelkana waa uga tacsiyaynaa ilaahay samir iyo iimaan ha idinka siiyo Ayaan leeyahay,aamiin aamiin insha allah.
July 13, 2013 at 23:43
July 15, 2013 at 12:58
sammir iyo imaan ilahay haa kasiiyo waliddin gabadha yar